URamaphosa ubuyise isithunzi sePhalamende - Kathrada Foundation | News24
LAST UPDATED: 2018-11-14, 15:19
URamaphosa ubuyise isithunzi sePhalamende - Kathrada Foundation
Johannesburg - I-Ahmed Kathrada Foundation ikhiphe isitatimende yazwakalisa ukuncoma inkulumo yokuqala kaMengameli Cyril Ramaphosa yokuvula iPhalamende, kepha yaxwayisa ngokuthi amazwi akhe kufanele "alandelwe yizenzo".
Le nhlangano ithokoze kakhulu ngokubuyiselwa kwesithunzi sePhalamende, kwangaba khona ukuphazamiseka, abaduba inkulumo noma abakhishwa ngesidlozane.
Isikhulu esiphezulu sale nhlangano, uNeeshan Balton, utuse ukuzibophezela kukaRamaphosa ngokuqinisekisa ukuthi abantu baziphatha ngendlela efanale futhi uzohola ngobuqotho.
OLUNYE UDABA: URamaphosa ugcizelele ukubaluleka kokuvuselelwa kwesimo somnotho
Le nhlangano ithe nokho izethembiso zakhe kumele zilandelwe yizenzo kuzona zonke izinhlaka zikahulumeni, kubhekanwe nqgqo nabo bonke abantu abanenkohlakalo nabathintekayo kolweState Capture.
Iphinde yancoma ukuthi uRamaphosa uthembise ngokuthi izinhlaka zezomthetho zizoqhubeka nomsebenzi wazo mayelana nokubanjwa koMbuso ngobhongwane nenkohlakalo, ngaphandle kokugxambukela.
Le nhlangano inxuse ukuthi umengameli "aqinisekise ukuthi abantu abanamava nabathembekile kuphela ababa yingxenye yeKhabhinethi yakhe kuthi labo abangawenzi umsebenzi ngendlela nabachaphazeleka kolweState Capture, badliwe yizembe".